Nidaamka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee Shiinaha iyo Soosaarayaasha Waxyaabaha Gaarka ah | Qiangdi
Nidaamka millatariga kahortagga Nitrogen - Waa nidaam Nitroji ahaan u ah warbaahinta, cadaadis togan, dhammaystirka geedi socodka shiidika ee alaabooyinka gaarka ah sida olol, qarx, si fudud loo ogsijiin karo iyo walxaha hygroscopic .taas oo lagu gaari karo budo kala duwan.
Nidaamka millatariga ee ilaalinta nitrogen gaaska wuxuu u adeegsadaa gaaska Nitrogen sida warbaahinta loogu talagalay sambabada macdanta si ay u fuliso geed-socodka qalalan ee superfine. Nidaamka diyaaradda jet badanaa wuxuu ka kooban yahay kombaresarada, haanta keydinta hawada, taangiga wax lagu keydiyo, qalabka wax lagu shubo, duufaanta kalasooca, aruuriyaha iyo kantaroole otomaatig ah. Marka nidaamka la hawlgeliyo, gaaska nitrogen waxaa lagu sii deyn doonaa nidaamka si hawada looga saaro ilaa nidaamka oo dhan gaadho qiimaha tirada ee uu hagaajiyo qalabka ogsijiinta. Markaa nidaamka ayaa si toos ah u bilaw qalabka quudinta maaddada si aad ugu quudiyo qalabka si siman qolka shiida ee millatariga diyaaradda. Gaaska nitrogen ee la cadaadiyey ayaa lagu duraa a xawaare sare qolka axdi qarameedka iyadoo la adeegsanayo qoob-ka-xiiriyaha gaarka ah ee ultrasonic. Sidaa darteed, qalabka waxaa lagu dhisi doonaa iyadoo la dardargelinayo, la saameyn karo iyo isku dhacday si isdaba joog ah dhexda socodka duritaanka ultrasonic. Qalabka dhulka ayaa la isugu keenayaa iyada oo lagu soo qulqulayo qolka qiimeynta. Ma soo geli karaan giraangirta qiimeynta waxaana dib loogu laaban doonaa qolka wax lagu shiido si loogu qodo. Midhaha khafiifka ah waxay gali doonaan shaxda kala-bixinta waxaana lagu qarxin doonaa kala-sooca duufaanka iyo aruuriyaha halka gaaska nitrogen uu ku laaban doono kombaresarada, kaas oo lagu miijin doono dib-u-warshadaynta.
1.Waxay ku habboon tahay in la burburiyo waxyaabaha ololi kara, waxyaabaha qarxa, si fudud loo ogsijiin karo iyo qalabka loo yaqaan 'hygroscopic'.
Hawlgalka mashiinka waxaa gacanta ku haya shaashad taabasho heer sare ah iyo PLC xakamaynta otomaatiga buuxa, Way fududahay in la xakameeyo waxa oksijiinta ku jira.
3.Nitrogen waxaa dib loogu warshadeeyay isticmaal aad u hooseeya. Xakamaynta nadiifinta nitrogen ayaa ka sarreysa 99%.
4.Sida ku xusan hantida maaddada, waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho Jet mill ama mashiinka farsamada farsamada sare.
5.Waxaa loo isticmaalaa Sulfur, Cobalt, nikkel, boron oxide iyo isku qurxinta hygroscopic iwm.
6. Nidaamka xakamaynta miisaanka, saxsanaanta sare, ikhtiyaar, xasiloonida wax soo saarka sare.
Naqshadeynta naqshadeynta qarxa ee nidaamka wareegga nitrogen si loo daboolo shuruudaha wax lagu shiidi karo ee ganaaxa ah ee walxaha ololi kara iyo walxaha qarxa.
Shaxda Qulqulka Nidaamka Nadaafadda Ka-hortagga Nitrogenka
Shaxda qulqulka waa mid si caadi ah u baaraandegaya mashiinka ， oo waxaa lagu hagaajin karaa macaamiisha. Waxaa jira sedex qaybood oo nidaamka oo dhan ah: Nidaamka waxsoosaarka nitrogen, nidaamka riixo nitrogen, nidaamka wax shiida ee ku lifaaqan.
Tijaabooyinka arjiga oo ku yaal dhinacyo kala duwan
Waxaa laga codsadaa daawooyinka (macaamiisha Shiinaha)
Waxaa lagu codsadaa baaruud
DBF-400 Iyada oo dhoobada dhoobada iyo PU .sababtoo ah adkeysigeeda oo loo adeegsaday warshadaha bateriga, Waxaa intaa dheer, waa shey loo yaqaan 'hygroscopic', Marka waxaan u isticmaalnaa NPS in lagu shiido walaxdan.
Warshadda kiimikada ee Hongkong, Poly-Si budada loogu shiidayo batteriga, Hal xirmo oo ah khadadka wax soo saarka mashiinka Jet-ka ee difaaca DBF-400, Awood wax soo saar 200kg / h, Cabbirka walxaha D90: 15μm
◆ Wax soo saarkayagu waxay suuq wanaagsan ku leeyihiin Shiinaha oo dhan,
Wax kastoo ku jira dawooyinka, Agrochemical, Waxyaabaha cusub, Batariga & Elektarooniga, Daboolka & Waxsoosaarka warshadaha.
◆ Waxaan u dhoofineynaa badeecadeena adduunka oo dhan: America, Australia, Afrika iyo Koonfur-bari Aasiya iyo Wadamada Bariga Dhexe, sida Pakistan, Korea, Vietnam, India, Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Japan, Thailand, Egypt, Ukraine, Russia , iwm. Inta badan Beerta Beeraha.
Hore: Warshadaha Batariga Iyo Waxyaabaha Kale ee Kiimikada ah Isticmaal Qalabka Sariirta Sariirta lagu sifeeyo
Xiga: Fasalka Jet Micron ee Kala-soocida